Sedex qof oo u shaqaynayey hay?adda WFP oo lagu dilay Matabaan, Hiiraan. – Radio Daljir
Diseembar 23, 2011 12:00 b 0
Matabaan, Dec, 23 – Sedex ruux oo labo ka mid u shaqaynayeen hay?adda WFP midka kalena uu ahaa qandaraasle ayaa lagu dilay magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan sida ay Radio Daljir u sheegeen dad ku sugnaa goobta uu dilku ka dhacay oo ah xero qaxooti oo ku taalla duleedka magaaladaasi.
Dilka ayaa la xaqiijiyey inuu geystay nin ka tirsan dadka barakacayaasha ah ee halkaasi ku noolaa, kaas oo qori kusoo qarsaday jaakad uu xirnaa ka dibna toogtay sedexda qof oo saarnaa gaari ay rabeen inay ku rawaxaan ka dib markii ay soo gabagabeeyeen hawl raashin qaybin ah oo ay goobtaasi ka wadeen. Sedexda qof ayaa dhammaantoodba Soomaali ahaa.
Maamulka Ahlu-sunna oo goobtaasi gacanta ku haya ayaa sheegay inay qabteen ninkii dilkaasi geystay ayna maxkamad soo taagayaan inkastoo aysan sheegin sababta uu dilkaasi u geystay.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee dawlada federaalka oo sheegay in aan shir aysan ogeyn lagu qaban karin xarunta baarlamaanka.